Raga Guska Weyn Waxay Leeyihiin Astaamo Nuucaan Ah - Cishqi.com
Raga Guska Weyn Waxay Leeyihiin Astaamo Nuucaan Ah
Astaamaha raga guska weyn leh: Raaxada raga guska weyn leh ayaa ah raaxo aanan caadi ahayn, kana duwan raga guska yar, haddii aad taqaano sida loogu raaxeeyo. Su’aashu waxay tahay waa maxay farqiga u dhexeeyo gus weyn iyo gus yar? Maxaase lagu gartaa raga guska weynka leh?
Jawaabtu waa mid fudud.
Astaamaha lagu garto raga guska weyn
Raga guska weynka leh had iyo jeer waa kuwo ka soocan raga guska yar leh. Maxaa yeelay dumarka marka ay guursadaan raga guska weynka leh durbaba waxaa is bedelo dareenkooda. Xiliyadaan oo kale dumarka waxay sameeyaan ficilo kala duwan sida faruuryo qaniinsi, taasoo ka dhigan sida uu u macaan yahay guska weyn.
Habeenka xiga markii la gaaro ee uu ninka naagtiisa la raaxeysanayo waa habeen ka duwan habeenada kale. Sabab?
Sababtoo ah waxay naagtu ka fikireysaa maalintii oo dhan guska weyn ee uu ninkeeda. Waxaa u muuqdo dareenka macaan ee uu baahalkaasi leeyahay, waxayna maskaxda ku hayneysaa marka uu dhex dhigayay diirimaadka ay dareentay.
Xaasaska qaar waa kuwo aanan sugi karin inta uu dharka iska bixinayo nimankooda,iyagoo bilaabo in ay si dhaqsi ah dharka ka bixiyaan isla markaana guska gacanta la aadaan.
Raga dumarka nuucaas ah waa ku duceystaan.
Of course waxaa jiro waxyaabo ay raga guska weyn ku fiican yihiin iyo waxyaabo badan oo aysan ku fiicneyn, waxaana ku sharixi doonaa qormadaan ee dhameyso.
Qish: Baro waxyaabaha guska adkeeyo
Dumarka iyo raga guska weyn
Marka ay raaxada bilaawato si aayar aayar ah, ninkuna uu dareemo kacsi waali ah, wuxuu ninku isku dayaaa in uu xaaskiisa dharka ka bixiyo oo boobsiiyo, halka xaasku ay sii rabto salsalaaxida guskiisa weyn ee butaca ah. Maxaa yeelay waxay sii rabtaa in ay ku sii raaxeysato guska weyn ee ninkeeda. Alla macaanaa.
Marka uu ninku ku soo dagaan jiniyo oo uu bilaabo xog xogasho iyo ku dhagid, indhuhuna uu kor u taago markaaas oo kale guska waxa uu u kacaa si aanan caadi ahayn.
Waa kuwee dumarka jecel ninka guska weyn?
Arintani ayaa ah arin ay dumarka ku kala aragti duwan yihiin, maxaa yeelay dumarka qaar baa aad u jecel raga guska weyn halka kuwa qaar ay ka helaan raga guska dhex dhexaadka leh. Si kastaba ha ahaatee rabitaanka guska weyn iyo guska yar waxa ay ku xiran tahay hadba gabadhu waxa ay xiiseyso ama ay jeceshahay.
Raaxada raga guska weyn leh
Raga waxay leeyihiin xubno qaas ah oo ay si waali ah uga kacsadaan, haddii laga taataabto ama laga dhuuqo. Waxay ka helaan raaxo aanan caadi ahayn. Inkastoo guska raga oo dhan loogu talo galay in lagu raaxeysto, hadana waxaa jiro qaabab badan oo loogu raaxeeyo, kuwaaso ragu ay aad uga helaan.
Kacsiga iyo raaxada raga
Hadalada naxariista leh iyo ham hamta sheekada macaan ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee ragu ku kacsadaan. Kicitaanka dareenka iyo raaxada raga guska weyn ayaa waxay u baahantahay in aad barato, haddii aad aqoonin waxay kugu qaadaneysaa waqti. Taasina ma ahan wax fiican.
Haddii aad guursato mid kamid ah raga guska weyn waxaa fiican in aad hadda sii barato sida loogu raaxeeyo raga qaasatan midka aad adiga ku hamineyso in uu noqdo ninkaaga. Tani waxay kaa saacideysaa isla marka aad guursato in uu is dhaho alley lahee qoftu waa qof wax badan ka taqaano raaxada raga. Taasina waxay keeneysaa in uusan kaa tagin, jaceyl xaad dhaaf ahna uu kuu qaado.
Qish baro: Erayo naxariis badan oo macaan ah
Astaamaha raga guska weyn
Gabdhaha badanaa waxaa laga yaabaa in ay aad u jecelyihiin in ay guursadaan mid kamid ah raga guska weyn sidaas ay tahayna marka nin guursadaan waxaa laga yaabaa in uu noqdo nin gus yar. Taasi dumarka qaar waxay ka qaadaan niyad jab. Hadaba maxaa lagu gartaa raga guska weyn leh?
Raga isku mid aha xaga xubinta taranka, rag waxaa jiro xubintoodu ay aad u yar tahay, xittaa marka uu kaco baahalka uu gaarayo ilaa 5 sinti mitir. Halka kuwa qaar ay gaaraan ilaa 30 sinti mitir.
Hadaba sidee ku garan karta ninka guska weyn?
Waxaa jiro astaamo lagu garto raga guska weyn inkastoo ay tahay uun mid mala uun, hadana mararka qaar waxay noqota mid sax ah. Aan kuu qishno astaamaha lagu garto raga guska weyn:
Waxa uu u dheer yahay faraha
Waxa uu ka balaaran yahay calaacasha iyo cagalada
Waxa uu leeyahay lafo balaaran
Qabiilada lagu tiro raga ugu guska weyn Soomaalida
Beesha Jareer Weyne
Qish: Halkaan waxaan ku diyaarinay: Sida loo soo jiito gabadha aad jeceshahay
Tani waa hadal heyn ugu badan ee Soomaalida, hadaba kuma xirno gus weynidu qabiil ee waxay ku xiran tahay sida uu qofkaasi Ilaahey u uumay. Marka la dhahayo qabiilada ugu guska weyn Soomaalidu, macnaheedu waxay tahay in in badan kuwo kamid ah qabiiladaasi ay gus weyn yihiin. Sidoo kale waxaa jiro kuwo kamid ah oo iyadana gus yar. Haddaaad aragto, Jareer weyne, Abgaal, Murusade, Ogaadeen, Gaal Jecel, Raxanweyn, Dhulbahante iyo Habar Yoonis ma ahan in ay ragooda oo dhan ay gus weyn yihiin.
Nolosha Dhabta Ah Waxay I Bartay Wax Cajiib Ah
Oohinta Galmada: Dumarka Nuucaan Ah Waa Macaan
Qofka Ku Neceb Ama Ku Nacay Waa Qof Nuucaan Ah
Waxyaabaha Guska Adkeeya Haddii Uu Kaa Jilcay
Dareenka Raga Maxaa kiciyo - Baro Erayo Jaceyl Oo Dareen leh